Speed up your computer without any software .. ~ Saw Chit Diary
ဒီနည်းလေးက Software မလိုပဲ Computer ကို Speed မြှင်နည်းလေးပါ လုပ်ကြည့်ပီးရင်တော့ ဖလမ်းဖလမ်းထသွားမယ် စက်ပြောတာနော် ဟိဟိ၊ အောက်မှာပုံလေးတွေနဲ့ ပြထားပါတယ် ဖလမ်းဖလမ်း ထချင်ရင်ပေါ့...
1.. Adjust your computer for best performance
click the "advanced" tab as shown below and
Under Performance click settings,
Another window will open as shown below,
"Adjust for best Performance" ရွေးပီး Apply OK လုပ်ပေးလိုက်ပါ
2..Reduce the number of your start up items in your taskbar
write msconfig in it, as shown below and click OK
Now click the "Services tab" above andascreen will open as shown below,
အပေါ်ကဘောက်ထဲမှာ Security Center နဲ့ Automatic Update ကို Uncheck လုပ်ပေးပီး Click >>Apply လုပ်ပါ
click "Startup" tab as shown below,
အပေါ်ကဘောက်ထဲက မိမိစက်ကို စတင်ဖွင့်တဲ့အခါ
automatically မတက်လာစေချင်တာတွေကို မှန်ချစ်တွေ ဖြုတ်ထားပါ။
ကျွှန်တော်စက်မှာတော့ မတက်လာစေချင်တာတွေ ဖြုတ်ထားလို့ အောက်ကအတိုင်းလေးပါပဲ
အားလုံးပီးရင် Apply >>OK
3..Clean your Disks daily
Finally Click Disk Cleanup
တခြား Drives တွေလဲ လုပ်ပေးသင့်ပါတယ် နေ့တိုင်းတော့ လုပ်စရာမလိုပါဘူး၊ Drive (C) ကတော့ daily လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်၊
4.. Always use "Add or Remove programs " Utility to delete unwanted programs
A window will open, there you will find the " Add or remove Program or Program and Feature"icon, double click the icon
ကျွှန်တော်တို့ Install လုပ်ပီးသား Software တွေကို မလိုချင်လို့ပြန်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင် အပေါ်ကအတိုင်းလေးသွားပီ Remove ဒါမှမဟုတ် Uninstall နဲ့ဖြုတ်ပါ၊ တချို့မသိတဲ့ သယ်ရင်းတွေက Install လုပ်ထားတာကို Right click >> Delete လုပ် တပ်ကြပါတယ်၊
5..Defragment your drive onceaweek
Finally Click "Disk Defragmenter"
နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့က Improving Loading Speed of "My computer"
Click my computer to open it. Once "my computer window" opens, click on "Tools" Tab then click on "Folder Options" as shown below,
ဒီနည်းကလေးက Software မလိုပဲ မိမိစက်ကို Speed မြှင့်နည်းလေးပါ လုပ်ပီးရင်းတော့ ဖလမ်းဖလမ်း ထသွားမယ် စက်ပြောတာ..ဟိဟိ...
"Automatically search for network folders and printers" ကို Uncheck လုပ်ပေးပီး Click >> Apply and OKလုပ်လိုက်ရင် ရပါပီ Computer ဟာ အရင်ကထက် အလုပ်လုပ်တာတွေ ပိုမိုမြန်ဆန်လာပါလ်ိမ့်မယ်၊
Credit : ဇွဲကပင်မြေမှ ရယူခဲ့ပါသည်။ (ခေတ်သစ်မောင်)